Home Somali News Somalia: Dowladda Federaalka oo war ka soo saartey xaaladda qaxootiga Soomaalida ee...
Ugu horeynta, dawladda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa Dawladda Kenya oo tan iyo sanadkii 1991-dii magangelyo siinaysay qaxootiga isdaba-jooga ahaa ee ka soo cararayey dagaaladii sokeeye iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ee ka dhacaya Soomaaliya, mahad taas la mid ah waxaanu u jeedinaynaa deeq bixiyayaasha caalamka ee mudadaas dheer quudinayey ama daryeelayey qaxootigaas tirada badan.
In ay xakamayso cadhada dawladda iyo dadka Kenya ka qaadeen weerarkii argaxisadda ee Mandheera oo ogaato in Alshabaab yihiin cadowga nolosha iyo nabada ee Soomaaliya iyo Kenya.
In la xoojiyo awooda iyo wada shaqeynta sirdoonka labada dal ee deriska iyo walaalaha ah, isla markaasna laga dhex abuuro labada shacab mutadawiciin la shaqeeya booliska (community policing), si loo qabqabto denbiilayaasha, gacmaha hay’adaha amnigana looga ilaaliyo in ay ciqaabaan dad aan waxba galabsan.
In ay dib u furto shirkadaha Xawaaladaha oo soo geliya Kenya dhaqaale fara badan, isla markaana ay ku tiirsan tahay nolosha qosas aad u fara badan oo ah Kenyan iyo qaxooti Soomaali ah.
In arinta dib u celinta Qaxootiga Soomaaliyeed loo maro qorshihii sadex geesoodka ahaa ee ay isla wadeen labada dawladood iyo UNHCR.
Wasaarada Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska, media@moi.gov.so